Mashiinka Diesel, Marinada Turbocharger, Kombaresarada Hawada - Sino-Ocean
Qinhuangdao Sino-Ocean Marine Marine & Makiinado Co., Ltd.
Laga soo bilaabo 1995, Qin Huangdao Sino-Ocean Marine Marine & Makiinado Co., Ltd. had iyo jeer waxaa ka go'an inay bixiso adeeg nidaamsan iyo xirfad-hal joogsi oo loogu talagalay warshadaha badda. Waxay hadda u korodhay ganacsi dhammaystiran oo ururiya qaybaha dayactirka 'keenista, farsamaynta iyo dayactirka, dayactirka markabka, taageerada farsamada iyo qalabka dhismaha maraakiibta oo wada socda.
Ballaarinta Kuleylka Saxanka
Shirkaddayadu waxay ilaalinaysay xiriir iskaashi dhow oo lala yeesho soosaarayaasha mashiinnada waaweyn iyo warshadaha hoosaadyada adduunka oo dhan, oo caan ku ah ilaha wax iibsiga ee lagu kalsoon yahay, tayo sare leh oo deggan iyo qiimo macquul ah.
Shirkadeenu waa shirkad soosaarayaasha caanka ah ee qalabka dayactirka badda oo leh 90% helitaan kayd ah oo ku saabsan waxyaabaha muhiimka ah. Faa'iidadan la hubo kaliya ma badbaadineyso waqti qiimo leh laakiin sidoo kale waxay na siineysaa horusocod kuwa tartamaya. Sidoo kale siyaasad qiimeyn faa'iido leh ayaa u oggolaaneysa xaalado faa'iido u leh macaamiisha.
Qeyb muhiim ah falsafada badda Sino-ocean waa in la bixiyo xalal tayo sare leh oo dhaqso leh. Sidaa darteed badda Sino-ocean waxay si taxaddar leh u abuurtay shabakad hufan oo ka kooban injineero badeedyo badan oo xirfad leh, alaab-qeybiyeyaasha OEM, bakhaaro istiraatiiji ahaan u yaal iyo macaamiil ku qanacsan.